IBhafu yeSipho yaseTshayina & Iseti yeSipa yeSipa Iseti yeSisipho seLamuni yevumba leBhafu uMvelisi kunye noMboneleli |Hayi
IBhafu yesipho & Iseti yeBhaskithi ye-Spa Seti Iseti yeBhafu enevumba leLamuni
I-PREMIUM GIFTING “Indlela yokupha ixabiseke ngaphezu kwesipho” Yiyo loo nto sidala ezona zixhobo zintle nezingaqhelekanga ze-spa ekupakishweni kwezipho ezibalaseleyo ezenza iingobozi zethu zezipho zibe nguNombolo .1 wemibono yesipho somfazi, umama, kunye nentombi.
1.ISITHUNGO :ILamuni eNtsha
Ivumba elitsha leLemon- Kanye njengokuhlaziyeka kwemini, ivumba lethu lelamuni lilula kwaye limnandi.Ivumba elitsha lelamuni lihlala ixesha elide kwaye uya kuqinisekisa ukuba uya kukunika ukuphumla okufunekayo obukulangazelela!
2.GCWALISA ISETI YESIPHO SPA Iqulathe
-200ml ijeli yeshawari
-200ml ibhafu iqamza
-50ml isithambiso somzimba
-6x15g iibhombu zokuhlambela
-100g ukuhlamba ityuwa
-Loofah ngasemva iscrubber
-Metal emele yokuhombisa okanye yokugcina.
Into yokuthambisa umzimba -
Yithi Sala kakuhle kulusu olomileyo.Esi sithambiso somzimba siyakondla kwaye sifumise ulusu lwakho ngelixa sikushiya nevumba elimyoli nelithambileyo.
Ijeli yeshawa -
Faka i-gel encinci ezandleni okanye kwi-sponge ethambileyo, emanzi - kwi-lather ecebileyo, enokhilimu.Ukubheja uya kuva umahluko.
Akukho nto ifana nebhafu eshushu yokuthoba izihlunu ezidiniweyo kwaye uphumze umzimba.Le ibhafu enevumba elithambileyo idala amaqamza amaninzi anogwebu kwaye iyathambisa kwaye ithambe ulusu ngelixa umanzisa.
Thela isixa esikhulu semveliso emanzini afudumeleyo.Gxuma amanzi ukuncedisa ukunyibilika kweekristale.
vele ulahle ibhombu yakho ebhafini kwaye ulinde i-fizzy ukuba ixakeke.
I-Loofah Back Scrubber-Esi scrubber sangasemva sinamacala amabini, elinye lithambile kwaye elinye lilungile kumphezulu wokukhupha.I-scrubber inezibambo, yenza kube lula ukufikelela kumqolo wakho osezantsi.
IParaben isimahla kwaye ayivavanywanga kwizilwanyana.
Izilumkiso okanye iZithintelo
KUPHEPHE UKUQHAGAMSHELANA NAMESO.UKUBA IMVELISO IFIKA EMEHLWENI HULA KWANGOKO NGAMANZI ACOCEKILEYOUKUBA ukucaphuka kolusu KWENZEKA YEKA UKUSEBENZISA.UKUBA UYAQHUBEKA IYAQHUBEKA BONISANA NOGQIRHA WAKHO.
Ixesha lokukhokela: iintsuku ezingama-25-45
I-Carton Meas: 49 * 45 * 26CM
Iiseti kwibhokisi nganye: iiseti ezi-6
Umhla wokuhanjiswa: iintsuku ezingama-25-45 emva kokuqinisekisa.
Izinto zethu eziluncedo zokukhuphisana
I-1.Isatifikethi: I-FDA, i-BSCI, i-GMPC, i-ISO.22716, umthengisi wobuchwephesha kunye nophicotho lokuhlola umthengisi.
I-2.Ixabiso lokukhuphisana kunye nomgangatho obalaseleyo kunye noyilo lwe-Innovative kunye noqwalaselo olulodwa.
3.Imixube ethile & nevumba elimnandi elikhethekileyo.
I-4.OEM kunye nenkonzo ye-ODM, sithanda abathengi ukuba baphuhlise izinto ezintsha.
5.Thina iSebe loLawulo loMgangatho linoxanduva ngokukodwa lokujonga umgangatho ukusuka kuzo zonke izinto eziluhlaza ukuya kwiimpahla ezigqityiweyo kwinkqubo nganye.
Izithako ezondlayo zokufuma kwexesha elide ukuthambisa nolusu olomileyo ukuze luthambile, luthambile kwaye lukhaphukhaphu.Yonke ifomula yendalo ngokupheleleyo, iimveliso ezisempilweni kwaye ezikhuselekileyo zisoloko ziyinjongo yethu.
siqinisekile kuluhlu lwethu olubanzi kunye nomgangatho ongaguqukiyo!Thenga iiseti ezipakishwe kakuhle kwizipho eziya kubahlobo, abantu obathandayo okanye nje ukuze uziphathe ngokwakho kumava akho e-spa ekhaya!
Ngaphambili: Ibhaskithi yesipho se-spa sasekhaya-Igumbi lokuhlambela le-7 leqhekeza elitofotofo kunye neseti yoMzimba yabasetyhini
Okulandelayo: Ibhaskithi yesipho sokuhlambela kunye nomzimba wabasetyhini kunye namadoda
IBhafu eNtofontofo kunye neseti yoMzimba yabasetyhini kunye namadoda
Ibhotolo yoMzimba-Isixhobo sokuFundisa umzimba
Iindidi ezahlukeneyo zesepha yesandla esigwetyiweyo, enobuhle...
IRose Hydrating Body Lotion Iqhelekile ukuya Komileyo Ulusu M...
Ukhathalelo loMzimba wokufuma okoNgezelelweyo UkuHyitha ibhotolo yeShea ...
Hlamba uMzimba oFumana yonke imihla ngenxa yolusu olomileyo nge ...